Saamileyda Shirkadda Hormuud oo maanta kulan ku yeeshay Muqdisho. – idalenews.com
Muqdisho -Shir Sanadeedkani Saamileyda Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud Telecom oo maanta ka dhacay Magaalada Muqdisho oo ay ka soo qeyb galeen Saraakiisha Shirkaddaasi iyo marti Sharaf kale oo aad u fara badan ayaa waxaa lagu soo bandhigay waxqabadka baaxadda leh ee Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud ay u sameysay Bulshada Soomaaliyeed.
C/llaahi Nuur Cismaan Agaasimaha Hormuud Telecom Foundation oo Khudbad dheer oo taabaneysa hay’addaasi ka jeediyay halka Maantat shirkaan uu ka dhacayay ayaa waxa uu sheegay in ay wax u qabteen dad fara badan oo Soomaaliyeed oo tabaaleysan isagoo xusay in Curyaamiin fara badan ay ugu deeqeen Baskiilada Curyaaminta loogu tala galay islamarkaana ay shaqo u abuureen.
Sidoo kale Agaasimaha ayaa sheegay in dhalinyaro kale oo daruufeysan ay shaqo u abuureen , ayna jiraan Iskuulo ay u sameeyeen dadka Indhaha la’ , waxaa kaloo uu sheegay in ay gurmad u sameeyeen dadka uu ku soo fatahay Wabiga Shabelle , initii lagu guda jiray Bishii Barakeysneed ee Ramadaana ay Afursiiyeen Saa’imiin badan oo ay qeyb ka ahaayeen Maxaabiista ku jirta Xabsiga Dhexe ee Magaalada Mudisho.
Ugu dambeyn C/llaahi Nuur Cismaan Agaasimaha Hormuud Telecom Foundation ayaa ka hadlay deeqo Waxbarasho oo uu sheegay in ay siinayaa Ardayda dhameysata Dugsiyada Dhexe ee Tiigsada kaalmaha Hore Fasaladooda xilliga ay u gudbayaan Dugsiga Sare.
Dhanka kale Max’ed Aadan Faarax Maamulaha Guud ee Shirkadda Hormuud Telecom oo isna kulanka ka hadlay ayaa si kooban uga warbixiyay Marxaladaha kala duwan ee ay Shirkaddu ku soo shaqeysay kuna soo gaartay heerka haatan ay mareysay oo uu carabaabay in ay gaarsiiyeen dad aqoon iyo waayo aragnimo durugsan leh oo ku soo biiray Shirkaddaasi isagoo sheegay in adeegyo Cusub ay hir galineyso dhawaan oo Taleefanada Isgaarsiinta ah , kuwaas oo uu carabka ku dhuftay in ay Muhiim u yihiin Bulshada Soomaaliyeed.
Xukuumadda Soomaaliya oo Hubka in ay dhigaan ugu baaqday Dhalinyarada Al Shabaab ka tirsan.